“Waxaan ku sigtay inaan dhinto markii ay goolka koowaad naga dhaliyeen Ecuador.”. Lionel Messi – Gool FM
“Waxaan ku sigtay inaan dhinto markii ay goolka koowaad naga dhaliyeen Ecuador.”. Lionel Messi
Liibaan Fantastic October 11, 2017
(Argentina) 11 Okt 2017 Lionel Messi ayaa ka hadlay seddexleeydii uu ka dhaliyay Ecuador xalay iyo xaaladihii kala duwanaa ee uu soo maray intii ay socotay ciyaarta.
Messi ayaa sheegay inuu dhimasho ku dhawaaday markii Ecuador ay ka dhalisay xulkiisa goolka koowaad ee ciyaarta.
Isaga oo farxad badan laga aqrisan karay wajigiisa ayuu yiri Messi:
“Waxaan u imaanay halkaan si aan guul u gaarno laakiin aad ayeey u adkeyd marka la fiiriyo jadwalka kala saraynta iyo garoonka oo ka sareeya dhulka”.
“Marnaba iima muuqan in aanaan u soo baxayn koobka adduunka, qabashada koobka la’aanta Argentina waa waali, waxaan u mahadcelinayaa taageerayaashii nagarab taagnaa waqtiyadii u danbeeyay inkasta oo xaalku uu nagu xumaa”.
“Waxaan isku daynay inaan u dagaalano guusha, laakiin markii xulka Ecuador ay dhaliyeen goolkii koowaad waxaan ku sigtay inaan dhinto, waxyaabo badan ayaana soo galay maskaxdayda”.
“Nasiib wanaag, waan barbaraynay waxaanan dhalinay kii labaad iyo kii 3-aad, maadama aan ku jirno xulalka ciyaaraya koobka adduunka waa inaan hagaajinaa qaladaad keenii hore waana inaan dhisnaa koox xoogan oo koobab ku guulaysan karta”.
Real Madrid oo ogolaatay in United ay ka iibiso Gareth Bale
Tababaraha xulka qaranka Brazil oo sheegay magacyada seddex dal ee ugu dhaw hanashada K.A ee 2018